कस्तो हुनुपर्छ प्रहरी र नागरिक सम्बन्ध ?
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सभाको निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिएको थियो । तर, निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनको सुरक्षाको अग्रमोर्चामा रहेर अहोरात्र खटेर सुरक्षा प्रदान गरेको नेपाल प्रहरीको योगदान कम छैन ।
अरस्तुले आफ्नो प्रसिद्व ग्रन्थ राजतन्त्रबारे (On kingship) मा मानिसका गुणहरूबारे विवेचना गर्दै भनेका छन्, ‘एशियालीहरूमा कौशलता (Skill) र बुद्वि (Intelligence) को प्रधानता हुन्छ । तर, तिनीहरूमा निराशा धेरै हुन्छ ।’ यो पंक्तिकार पनि अरस्तुको विवेचनाप्रति पूर्ण रूपमा सहमत छ । हौसिएर राम्रोलाई भगवान वा निरास भएर खराबलाई कुकुरको उपमा दिने नेपाली प्रवृत्ति विचित्रको छ । अहिले यो प्रवृत्ति फेरि पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
राम्रो गर्दा तिनै प्रहरी भगवान अनि गल्ती कमजोरी गर्नेबित्तिकै कुकुर दर्जाको गालीगलौजदेखि राजीनामासम्मको मागले प्रहरी संगठन कमजोर हुन्छ कि बलियो ? के सामाजिक अपराध, हत्या, हिंसा र बलात्कारका भौतिक संरचना तथा सैद्वान्तिक स्रोतहरूको वस्तुगत अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी प्रहरी प्रशासनमाथि अन्धाधुन्ध आगो दन्काएर सबै अपराध भष्म हुन्छ ? के प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामाले ‘चेली’ निर्मला पन्तप्रति न्याय हुन सक्छ ? खनाल बर्खास्त हुँदैमा हाम्रा छोरीचेलीहरू भविष्यमा सुरक्षित हुन्छन् भने प्रहरी संगठन नै किन चाहियो ? अब अनावश्यक यी बर्दिवाला सेता हात्तीेका जत्था किन पालिरहने ? के यो तर्क नै अहिलेको समाधान हो ?
नेपालीहरूले २००७, २०४६, २०५२ मा महान् जनयुद्व र २०६२/६३ मा जनक्रान्ति गरे, जसका तागतले शासक र शासित बीचमा एक–अर्काको अस्तित्व, जीवन, धन सम्पत्ति, र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सम्बद्र्वन गर्ने उदेश्यले आपसमा यौटा सामाजिक करार भयो, जसको परिणामस्वरूप राज्य, संविधान, कानून र प्रहरी प्रशासन बन्यो ।
२०१७ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायती व्यवस्था होस् वा ०५२ देखि ०६२/६३ सम्मको ज्ञानेन्द्रकालीन व्यवस्थामा होस्, प्रहरीको भूमिका तत्कालीन राजकीय शासन पद्वतिअनुरूप नै थियो । राज्यको निर्देशित कानून पालना र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर प्रहरी प्रशासनले काम गरेको देखिन्छ । जनशक्ति र साधन स्रोतको कमीका बाबजुद प्राकृतिक प्रकोप र विपदमा नागरिकको दुखमा हात दिन र जीउधनको सुरक्षा तथा उद्दारमा नेपाल प्रहरी नै अगाडि थिए । बन्द, विरोधमा हुने अवाञ्छित गतिवधि रोक्न पनि प्रहरी नै अग्रपंक्तिमा ढाल बनेर उभिएका थिए र छन् ।
यी घटनामा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकारीहरू व्यक्तिगत लाभमा परिचालित शक्तिको योजनामा फसेका पनि हुन सक्छन् । यो घटनाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, एकैपटक प्रहरी संगठन, सरकार र आधारभूत जनताबीच वितृष्णा सिर्जना गरिदिएको छ । यहाँ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने दुई–चार जना प्रहरी अधिकारी संलग्न भएको घट्नालाई इश्यु बनाएर सिंगो प्रहरी संस्थामाथि प्रहार गरिँदै छ । यसरी ९० प्रतिशत राम्रो कामको मुल्याङ्कन डिसअर्डर गरेर १० प्रतिशत नियोजित गल्तीको आधारमा प्रहरी संरचना खरानी बनाउँदा भोलि परिणाम के हुन्छ ? प्रहरीले गल्ती गरेमा कार्वाही गर्ने निकाय सक्रिय भइरहेकै देखिन्छ । प्रहरी संगठनजस्तो संवेदनशील संगठन कमजोर भयो भने यहाँ दिनदहाडै बलात्कार, गुण्डागर्दी, चोरी, तस्करी, अशान्तिले राजकाज गर्छ । त्यसो गर्दा देशको स्थिति के हुन्छ । त्यतातिर कसैले सोचेको छ ?